LM7805: सबै भोल्टेज नियामकको बारेमा नि: शुल्क हार्डवेयर
LM7805: सबै भोल्टेज नियामकको बारेमा
El LM7805 एक भोल्टेज नियामक हो, तर भोल्टेज डिभाइडरको साथ भ्रमित हुनु हुँदैन जुन हामीले हाम्रो अघिल्लो लेखहरूमा पहिले नै कुरा गर्यौं। थप रूपमा, यो केवल कुनै भोल्टेज नियामक मात्र होईन, तर यो निर्माताहरू र सबै प्रकारका DIY प्रोजेक्टहरूमा सबैभन्दा बढी प्रयोग हुनेहरू मध्ये एक हो। यसको प्रकारको नामले यसको सुझाव दिन्छ, सर्किटको भोल्टेज सिग्नललाई नियन्त्रित गर्नु हो जुन यो एकीकृत छ।
एक कम्पोनेन्ट जुन सधैं राम्रोसँग मूल्यवान हुँदैन र त्यो अवसरहरूमा धेरै प्रोजेक्टहरूको लागि पठाइन्छ। तर त्यो एकदम छ महत्वपूर्ण यदि तपाईं एक स्थिर भोल्टेज संकेत चाहनुहुन्छ भने। विशेष गरी महत्त्वपूर्ण LM7805 हो जब हाम्रो सर्किटहरूको लागि पावर सर्किटरी सिर्जना गर्ने। उदाहरण को लागी, केहि विशेष सुविधाहरुको साथ एक घर बनाउने विद्युत आपूर्ति सिर्जना गर्न, यी नियामकहरु मध्ये एक हराइरहेको हुनु हुँदैन।
1 भोल्टेज नियामक के हो?
2 भोल्टेज नियामक अनुप्रयोगहरू
3 7805: पिनआउट र डाटाशीट
3.1 अन्य मोडेलहरू
3.2 कहाँ किन्न
4 Ardino संग एकीकरण
भोल्टेज नियामक के हो?
Un LM7805 जस्तो भोल्टेज वा भोल्टेज नियामक एक उपकरण छ जुन भोल्टेज संकेतलाई परिमार्जन गर्न सक्षम छ यो यसको इनपुटमा जान्छ र यसको आउटपुटमा फरक भोल्टेज संकेत दिन्छ। यस आउटपुटमा, भोल्टेज सामान्यतया कम र निश्चित सुविधाहरूको साथ हुन्छ जुन जोखिमबाट बच्नको लागि आवश्यक हुन्छ वा सर्किटमा यसलाई राम्रोसँग काम गर्न दिईन्छ, यदि यो भोल्टेज भिन्नताहरूमा संवेदनशील छ।
यो सम्भव बनाउनको लागि, भोल्टेज नियामक छ प्रतिरोधक र ट्रान्जिस्टरहरूको श्रृंखलाको साथ एक आन्तरिक सर्किट द्विध्रुवी यस्तो तरिकाले जडान भयो कि यसले उपयुक्त तरिकामा भोल्टेज संकेतलाई राम्रो ट्यून गर्न अनुमति दिन्छ तपाईं आन्तरिक सर्किट देख्न सक्नुहुनेछ जुन माथिको छविमा यस उपकरणको प्याकेजमा एकीकृत छ।
Movilideas 10 एकाइहरु ...
बजारमा त्यहाँ धेरै फरक भोल्टेज नियामकों छन्हो, ती मध्ये धेरै सस्तो। LM7805 बाहेक तपाईंले find7809०,, 7806०7812, 78 7805१२, आदि पनि xx XNUMXxx० परिवारबाट पाउनुहुनेछ। यद्यपि यस लेखमा हामी XNUMX मा ध्यान केन्द्रित गर्दछौं, सब भन्दा लोकप्रिय मध्ये एक हो।
La भोल्टेज नियामक र विभाजक बीचको भिन्नता तनाव स्पष्ट छ। विभाजकले इनपुट भोल्टेजलाई यसको आउटपुट भन्दा कम भोल्टेजमा विभाजन गर्दछ, तर भोल्टेजको लागि संकेतलाई सही गर्दैन। अर्कोतर्फ, भोल्टेज नियामकमा, समान भोल्टेज आउटपुटमा प्राप्त गरिन्छ, तर संकेतसँग यसको आगतमा प्राप्त गरेको भन्दा बढी सटीक हुन्छ।
भोल्टेज नियामक अनुप्रयोगहरू
तपाईं कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ, LM7805 जस्तो आईसी धेरै चीजहरूको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। उदाहरण को लागी, बिजुली आपूर्ति तिनीहरू सामान्यतया xx 78 XNUMX को श्रृंखलामा समाहित गर्दछन्। वास्तवमा, बिजुली आपूर्ति, हामीले अघिल्लो लेखमा वर्णन गरेझैं, धेरै चरणहरू मिलेर बनेको छ:
ट्रान्सफार्मर: यो 220v को इनपुट भोल्टेज को उपयुक्त १२,,, or,,, 12 वा जे पनि मानको एक लाई उपयुक्त रूपान्तरण गर्न सम्भव छ।
ब्रिज रिकिफायर: त्यसो भए यो संकेतसँग उचित भोल्टेज हुनेछ, तर यो वैकल्पिक संकेत नै रहनेछ, यस पूलबाट पार गरिसकेपछि नकारात्मक संकेतलाई वेवास्ता गरिनेछ।
क्याप्यासिटरहरू: अब संकेतमा टीलेहरूको आकार छ, त्यो हो, केहि भोल्टेज आवेगहरूको कि क्यापेसिटरको माध्यमबाट जाँदा हँसिनेछ, लगभग एक सीधा रेखा।
तनाव नियामक: अन्तमा, नियामकले यो संकेतलाई परिष्कृत गर्दछ यसलाई पूरै सपाट र स्थिर बनाउनको लागि, अर्थात यसलाई सिधा वर्तमान संकेत बनाउन।
अन्य अनुप्रयोग उदाहरण भोल्टेज नियामकको केहि निश्चित एकीकृत सर्किटहरू फीड गर्नु हो जुन एक निश्चित फिगर भन्दा बढि संकेतको साथ खुवाउन सकिदैन। उदाहरणको लागि, सेन्सर वा चिप कल्पना गर्नुहोस् जुन 3.3..78v पावर भन्दा बढि जान सक्दैन। खैर, यस अवस्थामा, एक नियामक त्यो अवरोध पार गर्ने जोखिमहरू जोगिन प्रयोग गर्न सकिन्छ। सबै अतिरिक्त उर्जा heat XNUMXxx द्वारा तापको रूपमा नष्ट हुन्छ।
LM317: सबै समायोज्य रेखीय भोल्टेज नियामक के बारे में
7805: पिनआउट र डाटाशीट
त्यहाँ छन् LM7805 को बिभिन्न निर्माताहरु, जस्तै STMicroeलेक्ट्रोनिक्स, TI, स्पार्कफन, इत्यादि। थप रूपमा, तपाई यसलाई दुबै यसको परम्परागत प्याकेजमा र मोड्युलमा सजिलै पाउन सक्नुहुन्छ कि यसलाई आफ्नो परियोजनाहरूमा एरडुइनोमा एकीकृत गर्न सजिलो बनाउनको लागि। तपाईले किन्नु भएको मोडेलमा निर्भर गर्दै, म तपाईंलाई सल्लाह दिन्छु निर्माताको आधिकारिक वेबसाइटमा पहुँच गर्न सल्लाह दिईन्छ विशेषताहरू जाँच गर्नका लागि विशिष्ट डाटाशीटहरू मोडेल को लागी। याद गर्नुहोस् कि तिनीहरू सबै समान छन्, त्यहाँ एक निर्माताबाट अर्कोमा केहि परिवर्तनहरू हुन सक्छन्।
यदि तपाईंले यसलाई TO-220 प्याकेजमा खरीद गर्नुभयो भने, तपाईंले फेला पार्नुहुनेछ --पिन पिनआउट। तिनीहरू नम्बरित छन् र एउटा भोल्टेज इनपुटसँग मिल्दछ जुन तपाईं मोडुल गर्न चाहानुहुन्छ, केन्द्रीय दुई GND वा ग्राउन्ड (सामान्य एक) हो, तेस्रो पिन पहिले नै विनियमित भोल्टेजको आउटपुटको लागि हो, जुन स्थिर सिग्नल हामी संवेदनशील सर्किटको आपूर्तिको रूपमा प्रयोग गर्नुहोस् जुन हामी काम गर्न चाहन्छौं। तर तपाईले केहि अतिरिक्तहरू थप गर्नुपर्नेछ जस्तो कि क्याफेसिटरहरू निर्माता द्वारा सिफारिश गरिएको हो ताकि आउटपुट पर्याप्त छ।
मोड्युलको मामलामा, यो केहि महँगो हुन्छ, तर यसले तपाईका लागि चीजहरू धेरै सजिलो बनाउँदछ। यो 7805 उपकरण र तपाईं पनि अन्य तत्वहरू समावेश गर्दछ तिनीहरू यसलाई अरुडिनोसँग प्रयोग गर्न सजिलो बनाउँदछ। तपाईंलाई थप क्यापेसिटर वा अरू केहि आवश्यक छैन। थप रूपमा, यसमा कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्दै, इनपुट र आउटपुट (भिक्सी र जीएनडी) को लागि प्रत्येक कार्यान्वयनको लागि 78 XNUMXxx एक्सएक्सएक्सले उत्पन्न गर्ने तातोलाई उष्णता दिईरहेको उचित तापक्रम कायम गर्न एक हेटसिन्क समावेश गर्दछ।
को xx 78xx को श्रृंखलामा उपलब्ध विभिन्न मोडेलहरू बीच भिन्नता भोल्टेज नियामकों को धेरै सरल छ। यो परिवारको साथ आंकडा प्रत्येक नियामक द्वारा समर्थित अधिकतम भोल्टेज संकेत गर्दछ। उदाहरण को लागी:
LM7805: 5v र 1A वा 1,5A केही केसहरूमा।
यदि तपाईं यसलाई किन्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईंसँग यो अमेजनमा उपलब्ध छ, अन्य विशेष इलेक्ट्रोनिक्स स्टोरहरूको अतिरिक्त। दुई वेरिएन्टहरू जुन तपाईं किन्न सक्नुहुन्छ:
कुनै उत्पादनहरू फेला परेनन्। Package 220 को लागि प्याकेज TO-4 मा तपाईं यी १० उपकरणहरू खरीद गर्न सक्नुहुनेछ।
LM7805 मोड्युलमा प्रति इकाई under6मुनि मात्र।
तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ, तिनीहरू हुन् धेरै सस्तो उपकरणहरु...
Ardino संग एकीकरण
यदि तपाईं यसको बारेमा सोच्नुहुन्छ भने Arduino वा रास्पबेरी पाई वा बोर्डको अर्को प्रकारको साथ एक परियोजनाको साथ एकीकृत गर्नुहोस्, कुनै समस्या छैन। तपाईंले अन्य मोड्युलहरू जस्तै विशिष्ट पुस्तकालयहरू प्रयोग गर्नुपर्दैन, न त तपाईंलाई आफ्नो अर्डिनो आईडीईमा अतिरिक्त कोड थप्न आवश्यक छ, किनकि यो xx 78 xxx स्वयं निहित र भोल्टेज इनपुट संकेत परिमार्जन गर्न समर्पित छ। तपाईंसँग इलेक्ट्रोनिक्स ज्ञान हुनु पर्छ यो तपाईंको सर्किटमा सही ठाउँमा राख्नको लागि ...
लेखको पूर्ण मार्ग: नि: शुल्क हार्डवेयर » इलेक्ट्रोनिक कम्पोनेन्टहरू » LM7805: सबै भोल्टेज नियामकको बारेमा